(Daawo) Ciidan ka tirsan NISA oo ka gadooday mushaar la'aan - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Daawo) Ciidan ka tirsan NISA oo ka gadooday mushaar la’aan
(Daawo) Ciidan ka tirsan NISA oo ka gadooday mushaar la’aan
Ciidan ka tirsan Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA ayaa maanta sameeyay gadood ku saabsan mushaar la’aan, iyagoo muddo saacad ku dhow xirtay Taalada Daljirka Dahsoon ee degmada Boondheere illaa Isgoyska Jubba.
Sida wararku sheegayaan ciidamadan ayaa ahaa kuwo bilo ka hor tababar ku soo qaatay Dugsiga Tababarka Jen. Shirbow.
Ciidankan ka tirsan Nabadsugida ayaa saldhig ku lahaa garoonka diyaaradaha Dayniile, halkaasoo Hey’adda Nabadsugida ay geysay, waxaana ay isaga soo baxeen maanta gelinkii hore.
Wararka ayaa sheegaya in muddo 3 bil ah aysan qaadan wax mushaar oo ay ka maqan tahay xuquuqdooda.
Ciidankan oo watay gaadiidka dagaalka ayaa muddo u xirneyd wadada, iyagoo joojiyay dhaq dhaqaaqii gaadiidka ee wadadaas oo ku dhow Xarunta Taliska Nabadsugida Gobolka Banaadir iyo tan Xarunta Dhexe NISA ee Habar Khadiijo
Saraakiil ka tirsan NISA oo markii dambe ku soo baxay cabashadan ayaa ku guuleystay in ciidamadan ku qanciyaan inay joojiyaan xanibaada, isla markaana ay heli doonaan xuquuqdooda.
Ciidamo gadoodsan oo sheegay inay ka tirsanyihiin nabad-sugidda Soomaaliya oo xirtay wadada gasha Madaxtooyada Soomaaliya kana cabanaya mushaar la'aan muddo dhawr bilood ah.
Ciidamo gadoodsan oo sheegay inay ka tirsanyihiin nabad-sugidda Soomaaliya oo xirtay wadada gasha Madaxtooyada Soomaaliya kana cabanaya mushaar la'aan muddo dhawr bilood ah.Abdi Wahiid
Gepostet von Dalsan TV am Mittwoch, 16. September 2020
Previous articleWasaarada Beeraha Puntland oo digniin kasoo saartay Roobab dabeelo wa wata
Next article(Xog) Waare & Cumar Finish oo kusoo haray taageerada Farmaajo & 4-ta Qodob ee wax laga bedelayo